Kuwanika paWebhu Kunoenda Neseri Kupfuura Screen Readers | Martech Zone
Webhu Inowanikwa Inoenda Zvakanaka Kupfuura Screen Vaverengi
Chitatu, December 27, 2017 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Imwe nyaya neinternet yakanyarara zvinyararire muUnited States ndicho chinodiwa chekuwanika nevaya vakaremara. Iyo webhu inopa mukana wakadzama wekukunda zvipingamupinyi izvi saka ndicho chinotariswa kuti bhizinesi rako rinofanira kutanga kuteerera. Munyika zhinji, kuwanika hakuchisiri sarudzo, ndizvo zvinodiwa pamutemo. Kuwanika hakusi kunze kwematambudziko, zvakadaro, sezvo masosi ari kuenderera mberi achifambidzana uye matekinoroji achiitwa - kuwanika kunowanzo kuve kwekutevera pane kwekutanga chinhu.
Chii chinonzi Webhu kugona?
Mukudyidzana kwevanhu- bhurawuza, kuwanikwa kwewebhu kunoreva kuwanikwa kwechiitiko chewebhu kune vanhu vese, zvisinei nemhando yekuremara kana kuomarara kwekukanganisa. Izwi rekuti “kusvikika” rinonyanya kushandiswa kureva hunyanzvi hwesoftware kana software, kana mubatanidzwa wezvose zviri zviviri, zvakagadzirirwa kugonesa kushandisa komputa kana tekinoroji yekubatsira nemunhu ane hurema kana hurema.
Kukanganisa kunogona kuwanikwa kubva kuchirwere, kushungurudzika, kana kuve nekuzvarwa. Ivo vanowanzo kuwira mukati meimwe yezvikamu zvina zvinotevera:
zvekuona nemeso - yakaderera-kuona, kukwana kana kukwana bofu, uye kupofomara kwemavara.
Kunzwa - matsi, kuomesa kunzwa, kana hyperacusis.
Mobility - kuoma mitezo, cerebral palsy, dyspraxia, carpal tunnel syndrome uye kudzokorora kudzikira kwekukuvara.
Cognition - kukuvara kwemusoro, autism, hurema hwekuvandudza, uye hurema hwekudzidza, senge dyslexia, dyscalculia kana ADHD.
Kuwanika kunowanzo kupfupikiswa sezita risingazivikanwe a11y, panomirirwa nhamba yechigumi nenhamba dzetsamba dzakasiiwa.
Chinangwa chikuru chekupinda muwebhu ndechokubvisa zvipingaidzo zvinogona kudzivirira vanhu vakaremara kusangana kana kuwana mawebhusaiti. Vagadziri vanogona kushandisa semantic markup or hunhu hwekuwanika kana imwe nzira yekubatsira vakaremara kukurira kusagona kwavo kushandisa mawebhusaiti. Iyi infographic kubva kune Designmantic ruzivo Webhu Inowanikwa.
Chii chinonzi ARIA?
ARIA inomirira Anowanikwa Anopfuma Internet Zvishandiso uye iri seti yakakosha hunhu hwekuwanika iyo inogona kuwedzerwa kune chero markup. Chikamu chega chega chebasa chinotsanangura chinzvimbo chakatarwa cherudzi rwechinhu senge chinyorwa, yambiro, inotsvedza kana bhatani.
Muenzaniso kuendesa kwekuisa pane fomu. Nekuwedzera iro basa = bhatani kuchinhu cheHTML, ichipa vanhu vanoona kana kufamba-vakaremara nechiratidzo chekuti iko kutumira kunogona kudyidzana.
Edza Yako Saiti yeWebhu Kuwanika
Iyo Webhu Inowanikwa Yekuongorora Yekushandisa (WAVE) inogadzirwa uye kuitwa kuti iwanikwe semahara nharaunda sevhisi na WebAIM
Zvimwe Zvinyorwa paKuwanika:
Pasi Pose Webhu Consortium paKuwanika
Kunyorera Turu Yekuwanika Nongedzo
Webhu Zvemukati Zvekuwanika Nongedzo (WCAG 2.0)
Iwe unoshandisa kuverenga screen kana chimwe chishandiso chinowanikwa chesaiti yangu? Kana zvirizvo, ndingafarire kunzwa zviri kukushungurudza zvakanyanya nezvazvo!
Tags: a11ykubatikanahunhu hwekuwanikaInowanikwa Yakapfuma Internet KunyoreraariaCognitiondesignmantickunzwainfographickufambasemantic markupzvekuona nemesowavekuwanikwa kwewebhu
Kwenyika Kushambadzira: Kunzwisisa Akasiyana Mazera Mapoka uye Zvavafarira
Kumhanyisa Mapeji eFoni anofanirwa, asi Usakanganwa Analytics!